Vohitra Ségou : Fahendrena Anatin’ny Ohabolana Bambara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2018 14:00 GMT
Feno fahendrena betsaka any anatin'ireo ohabolana nentindrazan'ny “bambaras”, araka izay soratan'ilay bilaogera Oumar Dembélé avy ao amin'ilay tetikasa tohanan'ny “Rising Voices Ségou Villages Connection” ao amin'ny bilaogy Ségou Infos :
Ny ohabolana etsy ambony, izay maneho ny fahendrena ananan'ireo biby ampy traikefa, dia nipoitra avy tamin'ny teny bambara, tenimpirenena ao Mali. Ny bambara ihany koa no teny iraisan'ny maro kokoa ny fahatakarana azy ao amin'ny firenena, ary heverina ho toy ny teny ifampitan-kafatra. Nandritra ny fanjanahantany nataon'ny frantsay no nametrahana ny endri-tsoratra bambara, nefa mbola tena voafetra ny tahan'ireo mahay mamaky teny sy manoratra. Voatsindrin'ny teny frantsay loatra ilay teny, izay na dia fahalalàna kely monja aza dia efa hanamora ny fitadidiana ny voambolana bambara. Raha vao tsy vita ny mahita teny iray dia azo soloina aminà teny frantsay iray.
Raha hamaky ohabolana maro ao amin'ny Twitter, potsiro ity sy ity. Ny bilaogy Maneno Matamu dia mitahiry ireo ohabolana mitovitovy avy amin'ireo teny afrikàna isankarazany, isan'izany ny bambara, izay:
Raha mbola menamenatra no fahitàna ny teny bambara ety anaty aterineto, dia efa ampiasaina wmin'ireo sehatry ny media sosialy kosa izy. Araka izany, i Boukary Konaté, izay sady mpandrindra ny tetikasa Ségou Villages Connection rahateo, dia manoratra ny bilaoginy manokana, sady amin'ny teny frantsay no amin'ny tenin-dreniny. Mibitsika amin'ny teny bambara ihany koa izy, araka ny ahitàna azy ao anatin'ireo fifampiresahany tamin'i Phil Paoletta (@philinthe_).
Ho an'ireo izay liana te-hahafantatra bebe kokoa momba ny bambara na te-hianatra teny vitsivitsy na fomba fiteny, dia manolotra taridresaka iray ny Wikitravel [ang], ary ny an'ny Wikibooks [fr] taridresaka iray sy bokikely ho an'ireo vao manomboka [fr]. Misy ihany koa ny rakibolana iray ety anaty aterineto “bambara-frantsay-anglisy”.